I-slaving slab iyenziwe kanjani?
Kuze kube manje, izinto zokwakha zithandwa kakhulu. Lokhu kungenxa yokuntuleka kwesikhala sokuhlala kwezindlu kanye nebhizinisi, okuyinto futhi, eshukumisa ukwakhiwa. Ngakho-ke, ukwakhiwa kwe-slabs slabs sekube ibhizinisi elihle kakhulu. Iqiniso liwukuthi lesi sakhiwo sithandwa kakhulu, ngoba akudingeki izinto ezintsha kuphela, kodwa futhi nokulungiswa. Ngesikhathi esifanayo, ukuphathwa kwamadolobha ahlukene ngezinye izikhathi kudinga ukuthi abomabhizinisi bathuthukise izindawo zabo zokusebenza kanye nezitolo nge tile elinjalo. Yingakho ukukhiqizwa okuzimele kwe-slabs slabs kuyohlale kuyindlela enhle yokuthola imali.
Isimiso sokukhiqiza lolu hlobo lwe-tile ukuthululela izinhlobo ezikhethekile zekhonkri elungiselelwe. Ngemuva kwalokhu, ingxenye elandelayo kufanele isomile. Ngenxa yalokho, iyunithi eyodwa yomkhiqizo ilungile. Noma kunjalo, lobu buchwepheshe bungase bubukeke bulula, kodwa empeleni buqukethe ubuqili abaningi obuyisisekelo sabo bonke ukukhiqizwa.
Isisekelo sokwenziwa kwemikhiqizo enjalo ifomu ekhethekile. Yenziwe nge-silicone futhi imelela ikhophi yokubuyisela yengxenye yesikhathi esizayo. Ukwakhiwa kwama-slabs kubonisa ukuvuselelwa kwesicelo, okusho ukuthi isikhunta ngokwayo kufanele sibe sivumelanisiwe futhi sihlale sikhona. Kulesi simo, ngaphambi kokusetshenziswa komunye, gcoba ngokusebenza noma amanoni, ukuze umkhiqizo oqediwe ususwe kalula.
Ukwakhiwa kwama-slabs wokuvula: imishini namathuluzi
Ngesikhathi uhlanganyela ekukhiqizeni izinto zokwakha zalolu hlobo, kubalulekile ukunakekela amathuluzi kusengaphambili. Okokuqala, udinga i-mixer yekhonkritha. Kulo, kulula kakhulu ukwenza ikhambi elidingekile, ukuxuba ngokucophelela zonke izingxenye ezidingekayo. Ngemuva kokuthi ukhonkolo uthele emkhathini, kumele kusetshenziswe kuthebula eliduduzayo. Le divayisi ibalulekile kuphela, ngoba ikuvumela ukuthi ulahle ama-bubbles emoyeni, okwenzeka ukuthi ube nesisombululo lapho uthululwa, ngama-oscillations amancane, kodwa ahlala njalo. Ngakho-ke, ukwenza ukwakhiwa kwe-slabs kube nekhwalithi ephakeme, futhi imikhiqizo eqediwe ihlangabezana nazo zonke izindinganiso ezidingekayo, kokubili la madivayisi kufanele athengwe.
Ngemuva kokuba isikhunta siphethwe nge-vibration, sishiywa ukuze somile. Kodwa-ke, le nqubo ivame kakhulu futhi ngisho nokusetshenziswa khonkolo ekhethekile akunakwenzeka ukukhiqiza amanani amakhulu ngendlela efanayo. Ngesikhathi esifanayo, kukhona inqubo ekhethekile esheshisa kakhulu ukwakhiwa kwe-slabs. Ihlanganisa ukuphoqelela umswakama kusuka kumikhiqizo ngosizo lwamanzi ammonia. Ukuze wenze lokhu, kwanele ukwandisa wonke amafomu endaweni eyodwa, ubeke indwangu ehlanganiswe nesisombululo esinamafutha e-ammonia, bese uyifaka ngefilimu ye-polyethylene. Le nqubo ikuvumela ukuba unciphise isikhathi sokumisa ngesigamu, futhi kathathu. Kodwa-ke, kudinga igumbi elifanele umoya futhi isebenze kumshini ngamunye wokuzivikela. Ngemuva kokuqina, amathayili asuswe futhi agxilwe ngamapellets ezinkuni ukuma kancane.
I-Metal ibheka izinkuni: izici, izinzuzo, izici zokufaka
Iphansi: izindleko zizokwethula izinga!
Ingilazi enezinkanyezi kanye nezicelo zayo
Indlu ka-6 kuya ku-6 isiteji ezimbili: ukukhishwa kwamapulangwe, imithi (isithombe)
Sore phezu ubulili lip: yisiphi isizathu?
"Sebozol" (imoto): incazelo yezinkomba ukusetshenziswa, imfundo
Ukudla inkukhu kwesibindi. zokupheka
Borsalino - isigqoko gangster isitayela hhayi kuphela
Indlela ukupheka pancake
Hlobo luni ubucwebe okhanga?
Funda indlela ukudweba ihhashi enamaphiko futhi ngaphandle